Boula-matari, comme Tintin – Vahatra sy Elatra
AccueilLe coffretBoula-matari, comme Tintin
Manomboka androany ny taonan’ny YLTP 2017. Folo taona lasa aho no tao. Ny enimbolana voalohany, tena tsy hitako mihitsy izay antony nanaovako ilay YLTP ary tena ela dia ela vao nanaiky ny saiko fa mety amiko io vondrona io.
Taorian’io, taona 2010 – 2015 no tena tsaroako sahirana sy mafy indrindra tamin’ny fiainako, ary tena nahatsiaro tena ho malemy tanteraka, tsy nahahetsika, tsy nahavita na inona na inona ara-bakiteny aho. Nahazo 30kg be izao aho, tao anatin’io vanimpotoana io, noho ny panique lalimpaka tsy nety nandao ahy ary tena fahasahiranana tsy misy toy izany vao afaka mifantoka amin’ny asa iray ny saiko. Matetika aho no tsembodratsy mihitsy, miezaka manaraka ny zava-mitranga eo anoloako, fa tsy afaka, tsy haiko, tsy vitako.
Nahakivy ahy koa ny resaka manodidina ahy, izao régime, régime izao foana no ambetiteny, kanefa lalina noho ny tavy ivelany ny zavatra nitranga ary angamba boky iray manontolo vao ho voazavako. Sarotra koa ny miresaka izany, fa amin’ny Malagasy mantsy, sahala amin’ny hoe “zesita” izany, na any anaty film ihany no ahitana azy, na any an-dafy ihany no iharany, any anaty romans russes manahirana vakiana ireny no mahita azy – ary ao ny ho diso fijery ka hihevitra fa ny fo vakimpitiavana ihany no mitrosina amin’ny tany – tsy Anna Karenine ny tenako, aoka etsy, aoka lavitra. Tsapako koa fa sarotra ny manazava izany amin’ny olona izay tsy miaina izany akory, indrindra rehefa hoe « harerahana no niandohan’ny olana »…Nefa izay. Reraka aho tamin’izay.
Tsy hita ivelany koa, satria tia mihomehy aho ary heveriko ho fahalalampomba sy fahaiza-miaina ny manana sens de l’humour, sy tsy manatobaka loatra izay mahazo ny tena amin’ny olona. Izaho koa tsy dia mataho-bava firy, ka sarotra angaha ny haminavina ny tsy hita maso. Noho izany dia tsy nahatsikaritra mihitsy ny ankamaroan’ny olona, ny amin’ny sedrampiainana nolalovako. Ankona aho tamin’ny nahafatesan’Ing. Robbin Williams. Nahoana hoy aho, no namoy fo toy izao ity olona feno hehy sy hamorampo ity? Nahoana koa ary, no tsy mba tafarina mihitsy aho, izay olona matanja-tsaina sy mahatanty saoka ity? Taty aoriana, lasa saina foana aho rehefa mahita olona tena mampihomehy ahy matetika. Ny olona mampiseho hafaliana ve, manafina haihaimpo daholo? Asa re.
Tao anatin’ny 5minitra no nanapahako hevitra hamarana izany pejy maizina izany. 2015 ny taona tamin’izany, ary vao vitako izany dia tsy nanana intsony na tahotra, na havizanana aho. Seize the day, hoy Ing. Williams. Nandihy salsa tamin’ny orambe mikija aho. Sahala amin’ny afaka ny gadrako. Izay 5minitra izay no nandrasako dimy taona. Ary fantatro izao fa izay dimy minitra nandrasako dimy taona izay no nianarako tao amin’ny YLTP.
Henoko potika tanteraka ny ampahany betsaka momba ahy nandritra io fotoana “narariako” io, ary tena niova ny fijeriko ny fiarahamonina, ny tontolon’ny asa, ny fifandraisana amin’ny olona ary koa ny fifandraisako amin’Andriamanitra. Indraindray, mbola henoko mampitresaka kely ahy foana izay panique izay, henoko tampoka amin’ny fotoana tsy ampoiziko. Fa rehefa izay, tadidiko ilay fiteniko fony aho nanao YLTP: je suis boula-matari comme Tintin. Dia mihomehy aho.
10 taona taty aorian’ny YLTP, niova ny fiainako. Niova ny olona manodidina ahy, navelako tany ireo tsy manao afa-tsy ny mamikitra ahy sy izay mba kely ananako, nariako tanteraka ny fomba fijery izay hitako tsy mamokatra ho ahy, na dia hitako eny ho eny ihany aza, ary nekeko fehizay fa mananjo ho “izaho” aho, na tsy fanaperana aza – mety izay angaha no mampatsiro ny fiainana? Tiana aho ankehitriny, sady tia koa, izay tena vaovao be amiko, sahala amin’ny adaladala kely aho miaina azy. Hay ve ka misy izany? Marina mafy raha mba fantatro…Mamy ery…
Tsy noheveriko ho tanteraka amiko mihitsy izao hitan’ny masoko izao, fony aho niditra YLTP, 2007. Ary isaky ny mitsapa ny dingana vitako tao anatin’ny roa taona aho, isaky ny mijery izay manodidina ahy izao aho, isaky ny mibanjina an’Andriamatoa, dia fantatro fa miaraka amiko Andriamanitra. Dimy minitra no nanavotany ahy, ary tany amin’ny YLTP no nianarako ny fahasahiana hiaina izany. Je suis boula-matari comme Tintin.
Latsaka ny ranomasoko mitantara anareo an’izany rehetra izany. Mitomany ihany aho, izaho ilay mihomehy lava ity. Ankoatran’Andriamatoa sy Andriamanitra, tsy mbola niresaka izany mihitsy aho…
Haiko, ry Yltpiana vaovao, izay holalovanareo. Fa ny ao aorian’io no tena ady mafy.
Misaotra Rave, Dr Hanta, Miara, Dominique, Solofo sy ny namana be dia be. Misaotra Isaievitch.
Misaotra Andriamatoa. Tiako indry.
“And now that you don’t have to be perfect, you can be good.” ―